Naing BSell | Item - ရင်​ကပ်​ silicon bra
ရင်​ကပ်​ silicon bra
2in1 shirt white 👑
Hong Thong အဆိပ်ထုပ်ဆေးကပ်ခွါ
One set လှလှ​လေး​တွေ
ပျိူ​ဖော်​ဝင်​စမှာ ရင်​သား​လေး​တွေ ပုံကျကျ​လေးနဲ့ တသက်​တာ လှလှ​လေးဖြစ်​​နေ​အောင်​ ပုံသွင်းချင်​လား ?
အသက်​အရွယ်​ကြီးရင့်​လာလို့ အ​နေအထား မမှန်​လာတဲ့ ရင်​သား​​တွေ ပုံပြန်​ချချင်​လား ?
က​လေးနို့တိုက်​မိခင်​များ အပျိူ​လေးလို ရင်​သားလှလှ​လေးနဲ့ တင်းတင်းရင်းရင်း ပုံကျချင်​လား ?
ပွဲ​နေပွဲထိုင်​သွားခါနီးတိုင်း ကိုယ့်​ဝတ်​စုံနဲ့ လိုက်​ဖက်​မယ့်​ bra ​လေး​တွေ ​ခေါင်းမီး​တောက်​​အောင်​ရှာ​နေရလား ?
မပူနဲ့​တော့​နော်​ ဒီမှာ​လေ ရင်​ကပ်​ bra လှလှ​လေး ရှုံ့ကြိုး​လေး​တွေနဲ့ ရင်​သား​လေး​တွေကို လိုသလို အတင်းအ​လျှော့ လုပ်​လို့ရတာမို့ ရင်​သားပုံလှလှ​လေးနဲ့ ပွဲတက်​ဝတ်​စုံ​လေးဝတ်​ပြီး အလှဆုံး​လေး ရှိုးထုတ်​လိုက်​​တော့​နော်​
#ရင်​ကပ်​ #Silicon #bra